Fikru Maru oo la sii daayey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhakhtarka wadnaha ee Fikru Maru oo muddo shan sannadood dabadeed xabsiga laga sii daayay maanta. sawir: Privat.
Fikru Maru oo la sii daayey
La daabacay tisdag 15 maj 2018 kl 13.20
Gar-yaqaanka Fikru Maru ayaa laanta wararka ee Ekot u caddeeyay in laga sii daayay xabsiga.
Maanta oo ku beegan shan sannadood oo uu xabsiga ku jiray ayaa dhakhtar Firku Maru xabsiga laga sii daayey.
–Waxaannu og soonnahey in xabsiga laga sii daayey, hase yeeshee ma dooneyno in aannu qeylo dhaan sameeyno oo aannu sabab u noqonno dhibaato hor leh inta aanu gaarin gegida dayuurradaha. Isla maantaba u soo safri uu maayo Sweden, ma ahan mid lagu talo jiro, waxaase laga yaabaa inay berito noqoto, sida uu sheegay gar-yaqaanka Fikru Maru, Hans Bagner.
Farriinta in oodda laga qaaday Fikru Maru ayaa laga ogaaday gabadhiisa Emy Maru sida uu sheegay gar yaqaan Hans Bagner. Iyadoona inta aannu u soo baqoolin dalka Sweden uu u baahan yahay nooc dokumentiyo ah oo baasaboor uu ka mid yahay, sida uu shaaca ka qaaday Hans Bagner.
Wasiirka arrimmaha dibadda Sweden Margot Wallström ayaa ku qanac-san sii deeynta Fikru Maru, iyadoona intaa raacisay in kiisan lagu howlanaa sanooyin.
–Waan soo dhoweeynayaa farriinta ah in Fikru Maru dib loogu soo celiyey xorriyaddiisii iyo inay dacwaddiisii halkaa ku soo gabagaboowday. Wasaaradda arrimmaha dibadda ayaa sanooyin ku howlanayd kiiskan oo saameeyn ku yeeshay dad badan., sida ay sheegtay Wallström.